Zvirongwa & Nyaya |
Jinan Licheng Wanxiang Xintian Chikoro
LONBEST LCD Sliding Blackboard yakaunzwa mumakemikari laboratori uye fizabhoratori yeJinan Licheng Wanxiang Xintian Chikoro. Sechimwe chinhu chinosarudzika chedu LCD bhodhi, guruva risina-rave rakanyatsoenderana nechikumbiro chemarabhoritari asina guruva uye kuita kuti mukamuri rive rakachena kupfuura kare.
Mutungamiriri wechikoro anotaura zvakanyanya nezve LONBEST LCD Bhodhi. Iye anotenda kuti hutano hwevadzidzisi nevadzidzi hunovimbiswa nekudzivirira kusvibiswa kweguruva kubva kumakaki. Izvo zvakanyanya nyore kudzima runyoro pane iyo bhodhi nekudzvanya bhatani rimwe. Ivo havazombotambudzwa neguruva uye vachipukuta dhodhi.
Jinan Changqing Yunivhesiti-Yakabatana Junior High Chikoro
Iyi yekirasi yeJinan Changqing University-Inobatanidzwa Junior High Chikoro. Mudzidzisi wemasvomhu ari kunyora paBONBEST LCD bhodhi. Iyo inopindirana paforati iri mukati kuti ifanane nebhodi reblue. Tsvina-isina mahwanda uye imwe kiyi yekudzima basa inoita kuti dzigone kudzivirira guruva. Kuona kwevadzidzi kunovimbiswa nekuda kweye yakajeka girandi yekunyora uye isiri-radiation chimiro. Vadzidzi vari kumashure kwekirasi vanogona zvakare kuona kunyorwa kweruoko zvakajeka.
Mhinduro kubva kumudzidzisi: Vadzidzisi muchikoro vanoratidza kuti vadzidzisi vanowanzo chera nekuda kweguruva rakakonzerwa vachinyora vachipukuta. Uye vadzidzi vanoshushwa neguruva zvakare, kunyanya iwo ari pamberi, izvo zviri kunetsa vadzidzisi nevadzidzi zvakanyanya. LONBEST LCD bhodhi inogadzira yakachena uye isina guruva nharaunda kune vese vadzidzisi nevadzidzi. Zvakare, iyo tip yekurohwa kwese kunogona kuratidzwa senge yeiyo calligraphy.
LONBEST LCD Blackboard inotsiva yakasarudzika chaki bhodhi uye chena, ichipa yakachena uye hutano kudzidzisa nharaunda Panama International School uye kubatsira vadzidzisi uye vadzidzi kuvandudza kugona kwavo kudzidzisa.
Tsvina-isina mahwanda uye imwe kiyi yekudzima basa inoita kuti dzigone kudzivirira guruva. Kuona kwevadzidzi kunovimbiswa nekuda kweye yakajeka girandi yekunyora uye isiri-radiation chimiro. Vadzidzi vari kumashure kwekirasi vanogona zvakare kuona kunyorwa kweruoko zvakajeka.
Iri ndiro kirasi yechiChinese yeTai'an Zhiyuan Primary School. Mudzidzisi anyora pfupiso yerugwaro pa LONBEST LCD dhiibhodhi kuita kuti vadzidzi vadzokorore nyaya iyi zvichienderana nemazano ari pabhaudhi. Iyo yekupedzisira pakona yakawandisa yekuona inoita kuti zvikwanise kune vadzidzi vari kumashure kuti vanyatsoona kunyorwa kweruoko zvakajeka. Chii zvakare, iyo yegirini ruvara inogona kukwezva kutarisa kwevadzidzi uye kuchengetedza maziso uye zvakare.
Mhinduro kubva kumudzidzisi: Mumwe wevadzidzisi muchikoro chinoratidza kuti vabereki vanogutswa kwazvo neLNBEST LCD dhiibhodhi. Vana vanonakidzwa nepo vaine makirasi uye vanofarira kunyararidza pabhodhi panguva yekuzorora, sezvo izvi zviri zvinhu zvitsva kwavari uye vese vanoda kuyedza. Pamusoro pezvese, iro rakakosha kiyi kudzima basa rinovandudzawo kugona kwekudzidzisa. Basa racho rinogadzirisa kuoma kwekupukuta iyo yakasarudzika yevana vegiredhi repasi.
Showroom yemumwe wedu muThailand
Iyi ndiyo imba yekuratidzira yemumwe wedu muThailand. Inodzoreredza chaiyo mamiriro ebhizinesi hofisi. Iyo LCD inotsvedza bhodhi inogona kushandiswa mumakamuri emusangano nevanhu vangangoita gumi. Iyo hofisi diki ine 4-5 vanhu vanogona kusarudza LCD kunyora bhodhi (52 '' / 66 '' / 60 '').
Iyo LCD yekunyora bhodhi inogona kuiswa pamadziro kana kuiswa pane inofambiswa bracket. Vashandisi havazombotya kurasikirwa mamaki kana chaki kwete zvakanyanya, sezvo ivo vaigona kunyora neminwe kana chero zvinhu zvakaoma nehuremu kuomesa. Hapana zvekushandisa zvinodiwa zvachose, kuchengetedza mari.
Ratidziro yedu muShenzhen
Mahofisi edu makuru makuru ari muJinan, isu zvakare takamisa bazi muShenzhen, tinogamuchira kutishanyira.
Yedu LCD Bhodhi rakatsiva iro rekodhi bhodhi, kubvisa zvachose kusvibiswa kweguruva, uye kuchengetedza hutano hwevadzidzisi nevadzidzi.